ကလေးဘဝ၊ ကလေးများဆိုင်ရာဥပဒေ နှင့် ကလေးကောင်းကျိုးစောင့်ရှောက်ရေးဌာန | Samfunnskunnskap.no
ကုလသမဂ်ဂ၏ ကလေးမြားဆိုငျရာ သဘောတူစာခြုပျ (FNs barnekonvensjon) တှငျ ကလေးမြား မညျသညျ့အခှငျ့အရေးမြား ရထိုကျသညျကို အခကျြ ၄၂ ခကျြထညျ့သှငျးခြုပျဆိုထားသညျ။ ထိုစာခြုပျကို ၁၉၈၉ ခုနှဈတှငျ အတညျပွုခဲ့ပွီး နျောဝနေိုငျငံက ၁၉၉၁ ခုနှဈတှငျ သဘောတူ လကျမှတျရေးထိုးခဲ့သညျ။ နျောဝနေိုငျငံတှငျ ကလေးသူငယျမြားဆိုငျရာဥပဒေ(barneloven) ကိုကငျြ့သုံးသညျ။ ထိုဥပဒသေညျ အသကျ ၁၈ နှဈအောကျ ကလေးမြားနှငျ့ သကျဆိုငျပွီး ကလေးမြားကို မိဘမြားကဆောငျရှကျပေးရမညျ့ ဝတ်တရားမြားနှငျ့ ကလေးမြား၏ မိဘမြားထံမှ ရပိုငျခှငျ့မြားကို အကယျြတဝငျ့ ဖျောပွထားသညျ။
ကလေးသူငယျမြားဆိုငျရာဥပဒမှေ အရေးကွီးသော အခြို့အခကျြအလကျမြားကို အောကျတှငျ ဖျောပွထားသညျ။
ကလေးတယောက် မွေးဖွားပြီးသွားလျှင် ဆရာဝန် (သို့) သားဖွားဆရာမသည် သန်းခေါင်စာရင်းဌာနသို့ မွေးဖွားမှုသတင်းပေးပို့ရမည်။ ထိုအခါ ကလေး၏ မိခင် မည်သူ ဖခင် မည်ဝါ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မိဘများ အတူနေ မနေကို အကြောင်းကြားရမည်။ ဆရာဝန်မပါဘဲ မွေးဖွားရလျှင် သို့မဟုတ် မိခင်က နိုင်ငံခြားတွင်နေထိုင်စဉ် မွေးဖွားခြင်းဖြစ်လျှင် မိခင်ကိုယ်တိုင်က သတင်းပို့ရန် တာဝန်ရှိသည်။
ထုံးစံအရ ကလေးကို အဓိကတာဝန်ယူကြရမည်မှာ မိဘများသာဖြစ်ပြီး ကလေးသည် မိဘများ၏ ပြှုစုစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဂရုစိုက်မှုတို့ကို ရရန် လိုအပ်သည်။
ကလေးများကို ရှာဖွေကျွေးမွေးရန် မိဘများတွင် ဝတ္တရားရှိသည်။ ထိုသောအခါ ကလေးများ ကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစားအစာ၊ အဝတ်အထည် နှင့် အခြားအသုံးအဆောင်များ ရရှိအောင် မိဘများက လုပ်ကိုင်ရှာဖွေပေးရမည်။ ထိုဝတ္တရားမှာ ကလေး အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်သည်အထိ အကျုံးဝင်သည်။ ထုံးစံအရ ကလေးများ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသည့်တိုင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကျောင်း ပြီးဆုံးအောင်မြင်သည်အထိ ဆက်လက်စောင့်ရှောက်ရန် ဝတ္တရားရှိသည်။
မိဘများသည် သားသမီးကို သွန်သင်ဆုံးမမှု ကောင်းကောင်း ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး အမြဲတစေ ကလေး၏ကောင်းကျိုးနှင့် လိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ကလေးများကိုသွန်သင်ဆုံးမရာတွင် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းလုပ်ခြင်းကို ကလေးများဆိုင်ရာဥပဒေက တားမြစ်သည်။ သိသိသာသာ ကြမ်းတမ်းမှုများ (သို့) စော်ကားမော်ကာလုပ်ခြင်းများ လုပ်လာပါက မိသားစုအရေးတွင် ကလေးကောင်ကျိုးစောင့်ရှောက်ရေးဌာနက ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည်ဖြစ်သည်။
ကလေးများကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိသေးမီကာလအတွင်း ကလေး၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာများကို မိဘများက ဝင်ရောက်ဆုံးဖြတ်ပေးရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ဝတ္တရားရှိသည်။ ကလေးများဆိုင်ရာ ဥပဒေ၏ အရေးကြီးသော နိယာမတခုမှာ ကလေးတဖြည်းဖြည်းကြီးပြင်းလာသည်နှင့်အမျှ ကလေး၏သဘောထားကို မိဘများက ပိုပိုပြီး အလေးထားရန်ဖြစ်သည်။ ကလေးအနေနှင့် တစထက်တစ ရင့်ကျက် ဖွံ့ဖြှိုးလာသည်နှင့်အမျှ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကို တဖြည်းဖြည်း တိုးမြှင့်ပေးရမည်။ အသက် ၇ နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်သည် မိဘများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမစောင့်ဘဲ မိမိကိုယ်ရေးကိစ္စဖြစ်ပါက မိမိသဘောထားကို ဖော်ပြပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကလေး အသက် ၁၂ နှစ်ပြည့်ပြီးပါက ကလေး၏သဘောထားကို အထူးအလေးထားရမည်ဟု ကလေးများဆိုင်ရာဥပဒေက ဖွင့်ဆိုထားသည်။
အသက် ၁၅ နှစ်ပြည်ပြီးသော လူငယ်လေးတယောက်သည် ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍၎င်း အသင်းအဖွဲ့ ဝင်ခြင်းထွက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍၎င်း မေးလာခဲ့လျှင် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဥပမာပြရလျှင် – မည်သည့်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကျောင်းမျိုးကို ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားမည်ကို ထိုလူငယ်လေးကိုယ်တိုင်က ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ မိဘများက ထိုလူငယ်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးချင်ကြပြီး များသောအားဖြင့် လမ်းညွှန်မှုပေးချင်ကြပါသည်။ သို့သော် အဆုံးတွင် လူငယ်လေးကိုယ်တိုင်သာ ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ လူငယ်တယောက်အနေနှင့် နိုင်ငံရေးအသင်းများ ဘာသာရေးဝတ်ပြှုကျောင်းများ နှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခြင်းကို ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
မိဘများက ဂရုစိုက်သင့်သည်မှာ ကလေးများ မသင်မနေရ အခြေခံပညာရေးကို သင်ယူမှုဖြစ်ပြီး ကလေး၏ စွမ်းရည်နှင့်ဝါသနာများနှင့် သင့်လျော်မည့် အဆင့်မြင့်ပညာကို ရရှိစေရန် ဖြစ်သည်။
မိဘများခွဲခွာနေတိုင်နေကြသည့်တိုင် ကလေးအနေနှင့် မိဘ နှစ်ပါးစလုံးနှင့်တွေ့ဆုံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
နျောဝနေိုငျငံတှငျ အရှယျရောကျကွောငျး အသိအမှတျပွုသညျ့ အသကျမှာ ၁၈ နှဈဖွဈသညျ။ ဤသညျမှာ တရားဥပဒဆေိုငျရာကတိကဝတျမြားကို ဆုံးဖွတျနိုငျသညျ့အရှယျရောကျသညျကို ရညျညှနျးသညျ။ မိဘမြားအနနှေငျ့ ကွားဝငျတာဝနျခံရနျမလိုတော့ပေ။
နော်ဝေ ကလေးကောင်းကျိုး စောင့်ရှောက်ရေးဌာန
ကလေးများကို ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် ဆုံးမသွန်သင်ခြင်းတို့တွင် ဦးစားပေးအားဖြင့် မိဘများ၏ ဝတ္တရားဖြစ်သည်။ မိဘများအနေနှင့် ရေတိုရေရှည် အခက်အခဲများရှိကြပြီး အကူအညီလိုကောင်းလိုနေနိုင်သည် – ဥပမာ စားဝတ်နေမှုအခက်အခဲ။ ထိုသို့သော အခြေအနေများတွင် ကလေးနှင့် မိသားစုကို ကလေးကောင်းကျိုးစောင့်ရှောက်ရေးဌာနက ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ပါသည်။
မြှို့နယ်တိုင်းတွင် ကလေးကောင်းကျိုး စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ တခုစီရှိသည်။
ကလေးကောင်းကျိုးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းများကို ကလေးများဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ထိုဥပဒေသည် နော်ဝေနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သော အယုတ်အလတ်အမြတ်မရွေး လူမျိုးမရွေး နိုင်ငံသားမရွေး ကလေးအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည်။
ကလေးကောင်းကျိုးစောင့်ရှောက်ရေးဌာန သည် ကလေးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန် အကူအညီပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ကုလသမဂ္ဂ၏ ကလေးများဆိုင်ရာ သဘောတူစာချှုပ်နှင့် အညီဖြစ်ပြီး နော်ဝေ ဥပဒေ၏ အစိတ်အပိုင်းတခုလည်းဖြစ်သည်။ ကလေးများဆိုင်ရာ သဘောတူစာချှုပ်က သတ်မှတ်သည်မှာ ကလေးများသည် အထူးလိုအပ်ချက်များရှိပြီး ရှင်သန်ရေး၊ ဖွံ့ဖြှိုးရေး၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု နှင့် လူရာဝင်မှုတို့အတွက် အခြေခံရပိုင်ခွင့်များရှိထားသော သီးခြားလွတ်လပ်သူများဖြစ်ကြသည်။
ကလေးကောင်းကျိုးစောင့်ရှောက်ရေးဌာန၏ အရေးအကြီးဆုံး အလုပ်
– ကူညီရန် နှင့် ဖေးမစောင့်ရှောက်ရန်
အိမ်တွင်းရေး (သို့) အခြားအကြောင်းများကြောင့် ကလေးတယောက်အတွက် လိုအပ်လာလျှင် ကလေးကောင်းကျိုးစောင့်ရှောက်ရေးဌာနက ကလေးများနှင့် မိသားစုများကို ကူညီဖေးမမည်။
– ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရန် တာဝန် – မိဘများ၏ ဆန္ဒနှင့် ဆန့်ကျင်လျက်
သာမန်အားဖြင့် ကလေးတယောက်အဖို့ မိမိအိမ်တွင် ကြီးပြင်းခြင်းသာလျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်း ကလေး၏လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မိအောင် မိသားစုက လိုလားစွာလက်ခံထားသော ကူညီရေးအစီအမံများက ကျေနပ်လောက်အောင် ဖြည့်စည်းမပေးနိုင်ခဲ့လျှင် ကလေးကောင်းကျိုးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့က ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရန် ဝတ္တရားရှိသည်။ ကလေးကောင်းကျိုးစောင့်ရှောက်ရေးဌာနက ကလေးအပေါ် ပြှုစုစောင့်ရှောက်ရေးတာဝန် လွှဲပြောင်းယူရသည့် အခြေအနေရောက်စေရန် အလွန်အမင်း ဆိုးရွားသောအကြောင်းရင်းများ မလွဲမသွေရှိရမည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကလေးကို အနိုင်ကျင့်မှုကဲ့သို့သော ဆိုးဆိုးရွားရွား အုပ်ထိန်းမှုဝတ္တရားပျက်ကွက် သွားနိုင်ဖွယ် အခြေအနေများ။ အကယ်ဤ မိဘသဘောတူညီချက်မရဘဲ ကလေးကို အခြားတနေရာသို့ ရွှ့ပြောင်းထားရမည်ဆိုပါက ကလေးသူငယ်ကောင်းကျိုး နှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ တိုင်းခုံသမာဓိရုံး၏ စိရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရယူရမည်။ ထိုရုံးသည် တရားရုံးနှင့်အလားတူသော အစိုးရဌာနတခုဖြစ်သည်။
ကလေးကောင်းကျိုးဆိုင်ရာ အမှုတခုတွင် စီမံဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်
ကလေးကောင်းကျိုးဆိုင်ရာ အမှုအများစုသည် မိဘများကိုယ်တိုင် ကလေးကောင်းကျိုးစောင့်ရှောက်ရေးဌာနသို့ ဆက်သွယ်ပြီး အကူအညီတောင်းခံသည်မှ စတင်သည်။ ကလေးကောင်းကျိုးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့သို့ မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဆေးခန်း (helsestasjon)၊ ဆေးရုံ၊ ကျောင်း၊ နေ့ကလေးထိန်းဌာန၊ အိမ်နီးချင်း နှင့် အခြား ကလေးအတွက်စိုးရိမ်သူများက အကြောင်းကြား ဆက်သွယ်လာသည်များလည်း ရှိပါသည်။ ကျောင်း၊ နေ့ကလေးထိန်းဌာန၊ မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေး ဆေးခန်း တို့ကဲ့သို့သော ဌာနများမှ အစိုးရဝန်ထမ်းများတွင် ကလေးတယောက်အတွက် အလေးအနက်စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိပါက ကလေးကောင်းကျိုးစောင့်ရှောက်ရေး ဌာနသို့ဆက်သွယ်ရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားသော ဥပဒေအရ သတင်းပို့ရန်ဝတ္တရားရှိသည်။ အကြောင်းကြားချက်မှန်သမျှကို ဌာနက စိစစ်သုံးသပ်မည်သာဖြစ်သည်။ အကြောင်းခိုင်လုံသည်ဟု ကလေးကောင်းကျိုးစောင့်ရှောက်ရေးဌာနက ထင်မြင်လျှင် ကလေးအခြေအနေကိုသိနိုင်စေရန် မိဘကိုရော ကလေးကိုပါဆက်သွယ်မေးမြန်းလိမ့်မည်။
ကလေးနှင့် လူကြီးများ ကလေးကောင်းကျိုးစောင့်ရှောက်ရေးဌာနသို့ မည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်နည်း?
မြှို့နယ်တိုင်းတွင် နေ့အချိန်တွင်ဖွင့်သော ကလေးကောင်းကျိုး စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ တခုစီရှိသည်။ ညနေ ညပိုင်း နှင့် ရုံးပိတ်ရက်များ တွင် ကလေး (သို့) ကလေးတယောက်အတွက် စိုးရိမ်နေသူ တဦးအနေနှင့် ကလေးနှင့်လူငယ်များအတွက် အရေးပေါ် တယ်လီဖုန်းနံပတ် ဖြစ်သော 116 111 သို့ ဖုန်းဆက်နိုင်သည်။
ကလေးဖူလုံရေးစရိတျဆိုသညျမှာ နျောဝနေိုငျငံတှငျးနထေိုငျသူ အသကျ ၁၈ နှဈအောကျကလေးတိုငျးအတှကျပေးသညျ့ ငှကွေေးထောကျပံ့မှုဖွဈသညျ။ သားသမီးမှေးထား၍ကုနျကသြညျ့စရိတျမြားကို ဤထောကျပံ့ကွေးက ကာမိစလေိမျ့မညျ။ ငှကွေေးပမာဏအပါအဝငျ ကလေးဖူလုံရေးစရိတျနှငျ့ပတျသကျ၍ သိမှတျစရာမြားကို အောကျဖျောပွပါအငျတာနကျကှငျးဆကျတှငျ ဖတျရှုနိုငျသညျ – NAV Barnetrygd.
ကိုယျ့ကလေးကိုယျထိနျးခထောကျပံ့ကွေး (Kontantstøtte)း
ကိုယျ့ကလေးကိုယျထိနျးခထောကျပံ့ကွေးသညျ နကေ့လေးထိနျးဌာနကိုမပို့သော အသကျတနှဈနှငျ့နှဈနှဈကွားအရှယျကလေးမြားအတှကျပေးသညျ့ ထောကျပံ့ငှဖွေဈသညျ။ ထောကျပံ့ကွေးကို အသကျ ၁၃ လနှငျ့ ၂၃ လ ကွားကလေးမြားအတှကျ လစဉျ ငှသေားထုတျပေးသညျ။ နကေ့လေးထိနျးဌာနကို အခြိနျပိုငျးမြှပို့ခှငျ့ရပါက ထောကျပံ့ငှလြေော့သှားပါသညျ။ ငှကွေေးပမာဏအပါအဝငျ ကိုယျ့ကလေးကိုယျထိနျးခထောကျပံ့ကွေးအကွောငျး ပိုမိုသိမှတျစရာမြားကို အောကျဖျောပွပါအငျတာနကျကှငျးဆကျတှငျ ဖတျရှုနိုငျသညျ – NAV Kontantstøtte.